REPORTS – Than Lwin
ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစညး်များ၏အခန်းကဏ္ဍ ဖိုရမ်( တောင်ငူမြို့/ 30. 4.2018)
သံလွင် Citizen Empowerment Program မှစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစညး်များ၏အခန်းကဏ္ဍ ဖိုရမ်ကို ပဲခူတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့၊ ကေတုရတနာခန်းမတွင် 30. 4.2018 နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖိုရမ်တွင် ဆရာ ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ) မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသား(Active Citizenship) ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆရာ သီဟသူ(ခ) ဦးဆန်နီ မှ ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှု (Good Governance) ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်၊ ဆရာ သွင်လင်းအောင်မှ ကောင်းမွန်သာစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ(Civil Society) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တက်ရောက်လာသူများမှလည်း အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်း များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖိုရမ်သို့ တောင်ငူ၊ ကန်ရိုး၊ ကန်ထောက်၊ မြို့လှ၊ အုပ်တွင်း၊ ကျောက်ကြီး၊ ထန်းတပင် မြို့နယ်များမှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်များ၊ ၈၈/ငြိမ်းပွင့်နှင့် တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်း(၆၀)ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။Read More →
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) အဖွဲ့မှပြုစုသည့် သုတသနအစီရင်ခံစာ
သံလွင် (Citizen Empowerment Program)အဖွဲ့မှ ပြုစုသည့် “လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေမာျးသိမ်းဆည်းခံရမှုမာျးပြန်လည်စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း´´ သုတေသနအစီရင်ခံစာ နှင့် အစီရင််ခံစာအနှစ်ချုပ် PDF files အောက်ပါ link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ သံလှငြ (Citizen Empowerment Program)အဖှဲ့မှ ပှုစုသညြ့ “လယယြာမှနှငြေ့ အခှားမှမောွးသိမြးဆညြးခံရမှုမာွးပှနလြညစြိစစရြေးလုပငြနြးအပေါြ လေ့လာဆနြးစစခြှငြး´´ သုတသနေအစီရငခြံစာ နှငြ့ အစီရငြခြံစာအနှစခြွုပြ PDF files အောကပြါ link တှငြ download ရယူနိုငပြါသညြ။ Download ; Research Report Summary PDFRead More →
Development Challenges in Burmer
Dr. Nyi Nyi မှ Development Challenges in Burmer ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို Summit Park View တွင် 24,January 2016 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Than Lwin Citizen Empowerment Program နှင့် Triangle Women Support Group တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။Read More →
လယ်ယာမြေမူဝါဒ၊လယ်ယာမြေစီမံခန် ့ခွဲမှုနှင့် လယ်ယာမြေပြသနာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ – ပုသိမ်
သံလွင်ရဲ ့ဖိုရမ် ကို ၂၀၁၆၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ ့က ပုသိမ်မြို ့ကရုဏာမြန်မာစင်တာမှာပြု လုပ်ခဲ ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်မှာလယ်ယာမြေမူဝါဒ၊ လယ်ယာမြေစီမံခန် ့ခွဲမှုနှင့် လယ်ယာမြေ ပြသနာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက် (၉) နာရီမှာစတင်ပြီး ညနေ( ၅ )နာရီ မှာပြီး ပါတယ်။Read More →
ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
သံလွင်(Citizen Empowerment Program) နှင့် Traingle Women’s Support Group တို့ပူးပေါင်းပြီး ကြို့ပင်ကောက်မြို့ရှိ Pace on Peace Pluralism(PoPP) အဖွဲ့နှင့်လက်တွဲကာRead More →
အခင်းအကျင်းအသစ်နှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲ – နေပြည်တော်
သံလွင်နှင့် Triangle Women Support Group တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့်အခင်းအကျင်းသစ်နှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ Royal Lotus Hotel တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။Read More →